सोमबारको तपाईंलाई भाग्य के भन्छ ? पढ्नुस आजको राशिफल | Kantipath.com
मेषः आफन्तबाट वास्तविक सहयोग होइन अलिअलि कुराको सहयोग पाईनेछ । काममा असह महशुस हुनेछ । प्रयत्न पूर्वक गरेका काममा सफलता मिल्नेछ । कुनै कुरामा हेलचक्र्याई नगर्नु होला । आर्थिक कारोवारमा होशियार रहनु होला । विश्वास र भरोसमा काम गर्दा धोका हुनेछ । महत्वकाँक्षी योजनामा हात नहाल्नु होला । भाग्यले कम साथ दिनेछ ।
वृषः काममा देखिएका समस्या कम भएर जाने छन् । शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । सभा सम्मेलन तथा भोज भतेरमा सहभागि हुने अवसर मिल्नेछ । भाग्य भन्दा कर्ममा जोड दिनु होला । साना तिना समस्यामा नअल्झि काम गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी हुनेछ । अध्ययन अध्यापन कार्यमा थोरै प्रगति हुनेछ ।
मिथुनः समयले साथ दिने छैन । दैनिक काममा अवरोध आउने देखिन्छ । समस्याको वोझले थिच्नेछ । खर्च वृद्धि हुदा आर्थिक पक्ष दुर्वल बन्नेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । विश्वास घात हुनसक्छ । चोटपटको भय देखिन्छ जोखिम पूर्ण यात्रा नगर्नु होला । सरकारी काममा हेलचक्र्याई नगर्नु होला पछि पश्चताप हुनेछ ।
कर्कटः सामान्यतया ग्रह,गोचर अनुकुल देखिन्छ । सहास,धैर्यता र पराक्रम बढ्नेछ । आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन सन्तोषजनक नै हुनेछ । सामान्य खालको सहयोग मिल्नेछ । हतारमा गरेका कामबाट कम लाभ हुनेछ । धन सम्पतिको वृद्धि हुने योग छ । साझेदारी काममा हात नहाल्नु होला ।
सिंहः पूर्ण रुपेण अविश्वासका बादलका घेरा हट्ने छन् । काम गर्दा सहजता महशुस हुनेछ । सरल विधिबाट कार्य सम्पादन हुनेछन् । । विशेष गरेर यान्त्रिक तथा औषधी चिकित्सा जस्ता व्यापार,पेशा व्यवसायबाट बढि लाभान्वित हुनुहुनेछ । विरोधी कमजोर हुनेछन् । राजनैतिक क्षेत्रबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन ।
कन्याः समय आफ्नो लागि होइन,उपलब्धि आफ्नो लागि होइन तर लगनशिलता आफ्नो हुनेछ । अरुको कल्याणमा आफ्नो भविष्य नदेख्नु होला । रोकिएका काम सुचारु हुनेछन् । फलदायी यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । साथी भाईबाट सामान्य सहयोग मिल्नेछ । पढाई लेखाईमा थोरै प्रगति हुनेछ । आस्था र विश्वास बढ्नेछ ।
तुलाः उपलब्धिको यात्रामा तगारो लाग्ने देखिन्छ । काम गर्दा विभिन्न समस्या झेल्नु पर्नेछ । यत्नपूर्वक गरेका कामले पनि पूर्णता पाउने छैन । आस्था र विश्वास घट्नेछ । आलस्यता बढ्नेछ । मानसिक एवं शारीरिक दुर्वलता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । लगानी बढाउनु गलत हुनेछ । अहार विहारमा ध्यान दिनु होला ।
वृश्चिकः समय परिस्थितिले साथ दिनेछ । काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । उपलब्धिका मार्गहरु खुल्ने छन् । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । दामपत्य जीवनमा सुखानभूति हुनेछ । राजनैतिक सक्रिय बढ्नेछ । नोकरीमा नयाँ सम्भावना देखिने छन् । पढाई लेखाईमा थोरै चासो बढ्नेछ । विरोधी कमजोर बन्ने छन् ।
धनुः असहज परिस्थितिको महशुस हुनेछ । कार्य सम्पादनमा कठिनाई हुनेछ । काम गर्दा धैर्यता र लगनशिलताको खाचो देखिन्छ । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् । मुद्धा मामिलामा विजय हात लाग्नेछ । अहार विहारका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । लेनदेन कारोवार गर्दा बढि चनाखो रहनु होला । चाडो विश्वास कसैलाई नगर्नु होला ।
मकरः एकै चोटी दुईटा काममा हात नहाल्नु होला आफैलाई पछि अप्ठ्यारो पर्नेछ । एउटा एउटा चिन्ताले छोड्ने छैन । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । जीवन साथिको सहयोगमा काम गर्दा थोरै सजिलो हुनेछ । विवादित काममा हात नहाल्नु होला । पढाई लेखाईमा थोरै प्रगति हुनेछ । प्रेम प्रस्ताव आउनेछ ।
कुम्भः समस्याको भूमरीबाट बाहिर निस्कने प्रयत्न गर्नु होला नत्र धेरै उपलब्धि गुमाउनु पर्नेछ । विना योजना विना तयारी केहि नगर्नु होला । लगनशिल भई गरेका कामबाट थोरै लाभ हुनेछ । पारिवारिक खर्च समस्या बढ्न सक्छन् । परबन्धनको सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । राजनैतिक मुद्धामा नअल्झिनु होला ।
मिनः काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । गरेका अधिकाँश काम सफल हुनेछन् । आफ्नै बाहुबलबाट धेरै काम सम्पादन हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रै होला । इष्टमित्र,साथि भाईको सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । इज्जत प्रतिष्ठाको ख्याल राखेर काम गर्नु होला । वैदेशिक एवं शैक्षिक मार्ग पूर्ण आँशिक सफल देखिन्छन् ।
Previous Previous post: नेपाली जुत्ता चप्पलको ‘सेल–मेला’ सधैंका लागि बन्द !
Next Next post: केन्द्र र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व : संघले कर्मचारी पठाउँछ, स्थानीय तहले फिर्ता गर्छ